Fannaan Soomaali ah oo caan ah oo qarka u saaran in laga tarxiilo dalka uu deggan yahay + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Fannaan Soomaali ah oo caan ah oo qarka u saaran in laga...
Fannaan Soomaali ah oo caan ah oo qarka u saaran in laga tarxiilo dalka uu deggan yahay + Sawirro
(Hadalsame) 19 Maajo 2022 – Fanaanka Soomaaliyeed ee Cumar Shoolli ayaa dhibaato wayn wali ka haysataa go’aankii dawladda Maraykanku soo saartay sanadkii 2008 dii, kaas oo ahaa in la tarxiilo kadib markii lagu qabtay daroogo. Bulshada Soomalaida ee halkaa ku dhaqan ayaa ka dalbanaya dowladda inaysan tarxiilinn fannaanka maadama uu khatar ku wajihi kara dalkiisa haddii dib loogu celiyo.
Cumar wuxuu ka soo cararay Soomaaliya sanadkii 1996 dii oo ay dagaalo ka socdeen, wuxuuna gaaray waddanka Maraykanka.
Sanadkii 2008 dii ayaa lagu xiray gobolka Minnesota kadib markii lagu qabtay daroogo, halkaas oo uu ku xirnaa muddo labo sano ah.
Cumar waa aabe leh xaas iyo caruur, sidoo kale walaalihiis iyo waalidkiis ayay wada dagan yihiin gobolka Minnesota.
Wuxuu bilaabay shaqada fannaanimada sanadkii 2013 kii. Heesihiisa jacaylka ah ayaa markiiba uu ku magacwayn oo ku yeeshay Soomaalida Maraykanka iyo dunida kale jooga intaba.
Previous articleDEG DEG: Maraykanka oo jawaab rasmi ah ka bixiyey booqasho la sheegay inuu Xasan Sh ku tegayo dalkaasi
Next articleRuushka oo Ukraine geeyey taangiga cusub ee ”Terminator” oo mar qura bartilmaameedyo badan duqayn kara + Sawirro & Muuqaal